नगरकोटको बाटो तीन महिनाभित्र कालोपत्रे गर्छु
२०७६ मंसिर १० मंगलबार ०९:२१:००
उपनिर्वाचन आउने दिन चारदिनमा खुम्चिएको छ । सत्तारूढ पार्टी नेकपाका भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ (क) प्रदेशसभा सदस्यका उमेदवार देवीप्रसाद ढकाललाई भ्याइनभ्याइ छ । सुरूमा उनलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन हम्मे पर्‍यो । त्यसपछि जनताको घरदैलोमा पुग्न भ्याइनभ्याइ भयो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सत्तासीन दल भएकाले अन्य उमेदवारको तुलनामा प्रश्नहरूको सामना पनि उत्तिकै गर्नुपर्‍यो । तथापि उनले आफू निर्वाचित भएलगत्तै निर्वाचन क्षेत्रको एकीकृत विकासका निम्ति लागि पर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यही प्रतिवद्धताका आधारमा आफूलाई निर्वाचित गराउने प्रयत्नमा छन् ।
घरदैलो, भेला र बैठकको दोडधूपकैबीच बाह्रखरीकर्मी अक्षर काका र केशव सावदले उमेदवार ढकालसँग गरेको कुराकानीः–
निर्वाचन सङ्घारमा आइसक्यो, तयारी के–कस्तो छ ?
सोमबार बिहानबाट घरदैलो समाप्त भएको छ । निर्वाचन क्षेत्रका दसैवटा वडामा पुग्न भ्यायौं । अहिले हामी मतदाता शिक्षामा केन्द्रित भएका छौं । ११ गते निर्वाचन बृहत् जनसभा राखेका छौं । जनसभामार्फत हामी मतदातालाई आफ्ना कुरा थप प्रष्ट पार्नेछौं ।
तपाईं अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा पनि उमेदवार हुनुहुन्थ्यो । उमेदवारी फिर्ता लिने समयसीमा पछि तपाईंले एमाले उमेदवारलाई सघाउने भनेर घोषणा गर्नुभयो । यद्यपि तपाईंको चुनाव चिह्नमा पनि मत खस्यो । त्यतिबेलाको जनताको आकाङ्क्षा अहिले बदलिएछन् कि उस्तै पाउनुभयो ?
अघिल्लो पटक हाम्रो गठबन्धन (तत्कालीन एमाले, माओवादी केन्द्र, राजमोको गठबन्धन)ले हरिशरण गुरु (हरिशरण लामिछाने)लाई नै सघाउने अन्तिममा निर्णय गरेपछि मैले छाडेँ । मतदाताको दुई–तीनवटा कुरा छ । पहिलो भौतिक पूर्वाधारको कुरा छ । यसमा मुख्यतः बाटोको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, कालोपत्रे गर्नुपर्ने, ढल निकास र खानेपानीको प्रवन्ध हुनुपर्‍यो भन्ने नै ।
अर्को, धार्मिक आस्था, महत्त्वसँग जोडिएका कला, संस्कृतिको संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने कुरा छन् ।
त्यस्तै उत्तरपूर्वी भक्तपुर पर्यटकीय केन्द्र हो । यसले आफ्नो परिचय पर्यटकीय केन्द्रकै रूपमा बनाएको छ । नगरकोट, चाँगुनारायण, ठूलीब्रह्मायणी, ब्रह्मायणी, जालपादेवीलगायत पर्यटकीय र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन् । यी क्षेत्रको एकीकृत विकास खोजेका छन् यहाँका मतदाताले ।
अर्को, यहाँको प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्रको अधिकांश भूभाग ग्रामिण, काँठ क्षेत्र छ । मानिसहरू उत्पादन योग्य जग्गाजमिन बेचेर गुजारा चलाउन बाध्य छन् । अधिकांश जनता ऋणमा छन् । रोजगारी छैन । रोजगारीको सिर्जना र अभिवृद्धि कसरी गर्ने भन्ने नै यहाँको मूल प्रश्न हो ।
हामीले चुनावी प्रतिवद्धता र घोषणापत्रमा पनि यिनै कुरालाई मुख्य विषय बनाएका छौं । हामी निर्वाचित भएपछि प्राथमिकताको क्षेत्र, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएर प्रस्तुत हुन्छौं ।
यसका साथै केही रणनीतिक महत्त्वका योजना पनि हामीसँग छन् । नगरकोटको बाटो ६ वर्षदेखि अलपत्र छ । मैले प्रतिवद्धता जनाइसकेको छु– तीन महिनाभित्र कालोपत्रे गराइसक्नेछु ।
अहिले देख्न सक्नुहुनेछ, काम द्रूत गतिमा भइरहेको छ ।
वीर अस्पतालको जग्गा अस्पतालको नाममा गइसकेको छ । तर अस्पताल बन्ने परियोजनामा कसले लगानी गर्ने ? कति लगानी गर्ने ? कहिलेसम्म बनाइसक्ने भनेर जनताले प्रश्न गरेका छन् । त्यस म मेरो कार्यकालभरिमा पूरा गर्नेगरी योजना बनाउँछु ।
म यहाँका मतदातालाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु– वीर अस्पताल भक्तपुरमै आउँछ । भक्तपुरमै बन्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि हामी सक्षम छौं ।
चाँगुनारायण नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको समस्या विद्यमान छ । त्यसलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण हुन दिँदैनौं । त्यहाँको समस्या अविलम्ब समाधान गर्छौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट त्यहाँका जनताले पाइरहेको लाभ खोसिन दिँदैनौं ।
यी कुरामा जनता कन्भिन्स छन् ।
एउटा प्रसङ्ग बताउँ । यहाँका जनता भनिरहेका छन्, हामीले प्रतिनिधिसभामा ४० वर्षदेखि विरोध गर्ने सांसदमात्रै पठायौं । प्रदेशमा हरि गुरु निर्वाचित हुनुभएको थियो । एउटा बजेट बनाउन नपाइ दुःखद् निधन भयो । अतः यसपल्ट विरोध होइन विकास गर्ने सांसदको आवश्यकता छ भन्ने दृष्टिकोण पाएको छु ।
अघिल्लोपटक निर्वाचित उमेदवारको दायित्व पनि होलान् । उहाँलाई जनताले बोकाएको विश्वासको भारि तपाईंले थाम्न सक्नुहोला त ?
हाम्रो अहिलेको प्रतिवद्धतापत्र हरि गुरुले जनतालाई आश्वस्त पार्नुभएकै कुरामा टेकर बनाएका छौं । मूल घोषणा हाम्रो हिजोकै हो । उहाँको अनुपस्थितिमा पनि सङ्घ, प्रदेश र नगरपालिकाबाट गर्न सक्ने काम गरिरहेकै थियौं । अपेक्षा र आकाङ्क्षा थपिएकाले केही नयाँ योजना पर्ने नै भए ।
यो उपनिर्वाचन सरकारको मध्यावधि समीक्षा हो । तीनै तहमा तपाईंहरूको सरकार छ तर जनताको आकाङ्क्षाको न्यूनतम पनि सम्बोधन भएको छैन भन्ने गुनासो छ, किन होला ?
आकाङ्क्षाको कुनै सीमा हुँदैन । अमेरिकामा पनि जनताको आकाङ्क्षा पूर्ति भएको छैन । बेलायतमा पनि पूरा भएको छैन । तर आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न दुई वर्षको अवधि पर्याप्त होइन । यहाँ त ३० औं वर्षदेखि समस्या थुप्रो लागेर बसेको थियो । त्यसलाई एक–एक गरेर पन्छाउन त समय लाग्ने नै भयो ।
हामीले हिजो पाँचवर्षका लागि योजना तर्जुमा गरेका थियौं । मध्यावधिक लक्ष्य भेट्टाएका छौं । विकासको रफ्तार छिटो होस् । सुविधा चाँडो पाइयोस् भन्ने जनताको जुन पवित्र भावना छ । त्यसले हामीलाई अझ गतिशील, क्रियाशील बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।
हामीले भनेका छौं । मूलभूत सडकहरू कालोपत्रे भइसक्ने छन् । सबै घरमा खानेपानी प्रवन्ध गरिसक्ने छौं ।
भत्केकोपाटी–नगरकोट जोड्ने सडक ६ वर्ष भएछ योजना सुरू भएको । ठेक्का सम्झौता सकिएकै चार वर्ष हुन लागिसक्यो । ६ वर्षमा नभएको काम तीन महिनामा सकिएला त ?
यसमा हामी विगतदेखि लागि परेका छौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जो नेकपाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँकै पालामा भारतको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर सुरू गरेका हौं । यो बाटो नगरकोट लगेर छाड्ने भनेर हालेको पनि होइन । नगरकोटसम्मको १५.६६ किलोमिटर पहिलो चरण, त्यसपछि सीपाघाटसम्म ३६ किलोमिटर अर्कोचरण र इन्द्रावतीमा पुल बनेपछि चौतारा र गणेश हिमालको फेदीसम्म पुर्‍याउने रणनीतिक महत्त्वको परियोजना हो ।
यस्ता परियोजनमा जुन देशबाट ऋण लिएको हो, मुख्य ठेकेदार त्यही देशको हुन्छ । नेपाली ठेकेदार सहायक ठेकेदार हो । जसको हिस्सा, साझेदारी ५१ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । रकम निकासाको समस्या देखिएपछि पार्टीका केन्द्रीय सदस्यद्वय महेश बस्नेत जो क्षेत्र नम्बर दुईका सांसद पनि हुनुहुन्छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोम मिश्र, मलगायत भक्तपुरको नेकपाको सिङ्गो पार्टीपंक्ति लागेर समस्याको हल भयो ।
हामीले नेपाली तर्फको ठेकेदारलाई काम छिटो सक्न ताकेता पनि गरिरहेका छौं । काम लगभग सकिएकै छ । लगभग भनेको नालाको काम सकिएको छ । त्यसपछि पिचको काम सुरू हुन्छ । ओसपाल भइदिएको भए छिटो हुन्थ्यो । यो ओसपालको परियोजना होइन । निर्माण व्यवसायीको प्रतिवद्धताको आधारमा तीनमहिनाभित्र सक्ने भनेका हौं ।
तपाईंलाई टिकट दिने केन्द्रको निर्णयपछि पार्टीमा केही अन्तरविरोधजस्तो पनि देखिएको थियो । कायम छ कि, समाधान भयो ?
अन्तरविरोध होइन व्यक्तिको आकाङ्क्षाचाहिँ थियो । राजनीतिक गर्ने व्यक्तिहरूको म उमेदवार बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आकाङ्क्षा हुनु स्वाभाविकै हो ।
आकाङ्क्षा साथी मध्ये एकजना प्रस्तावक हुनुहुन्छ । अर्को एकजना समर्थक हुनुहुन्छ । अर्को आकाङ्क्षी साथी घोषणपत्र बनाउने कमिटीमा हुनुहुन्छ । अर्को साथी निर्वाचन परिचालन कमिटी अन्तर्गत कार्यक्रम व्यवस्थापन उप–कमिटीको संयोजक हुनुहुन्छ । अर्को आकाङ्क्षी साथी प्रचार–प्रसार कमिटीको संयोजक हुनुहुन्छ । भनेपछि कहाँ रह्यो त अन्तरविरोध ?
असन्तुष्टहरूले पार्टी कार्यालयमा ताला लगाएको होइन र ?
होइन होइन । मिडियामा खै कसरी आयो ? तालाबन्दी भएको भए खोल्न वार्ता, सहमति हुनुपर्ने त्यस्तो भएको त सुन्नुभएन । कार्यालय निर्वाध चलिरहेको छ ।
भक्तपुरको नेकपा एकमतका साथ चुनावमा जुटेको छ । पाँच वर्षका लागि यस क्षेत्रमा नेकपा निर्वाचित भएको हो । जनताले हाम्रा प्रतिवद्धता अनुमोदन गरेका हुन् । बीचमै भवितव्य परेर चुनाव गर्नुपर्‍यो । अतः नेकपाको उत्तराधिकारी नेकपा नै हो । हरि गुरुको उत्तराधिकारी नेकपा नै हो । हरि गुरुकै पार्टीको मान्छे निर्वाचित हुनुपर्छ भन्नेमा आम कार्यकर्ता एकमत छन् ।
भक्तपुरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पनि राम्रो प्रभाव छ । कांग्रेस पनि जनअसन्तुष्टिलाई क्यास गर्न उद्दत देखिन्छ, चुनौती त होला नि !
दुई वर्षअघिको भक्तपुरको दुई नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था र अहिले त्यहाँको अवस्था देखेर भक्तपुरका जनताले आफैँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी संसद्मा जाने भनेको विरोध गर्न नै हो । नेमकिपाको विजयले सरकारको अङ्क गणितमा खासै असर गर्दैन । तर यहाँको विकासको अङ्क गणित बिग्रन्छ ।
भक्तपुर १ को प्रदेशसभामा हामी विकासको मूल प्रवाह हौं । यो निर्वाचनबाट बाहिरिनेबित्तिकै यसको असर विकास–निर्माणमा पर्छ । यसमा यहाँको जनसमुदाय कन्भिन्स छन् । चुनावको दौरानमा विपक्षी पार्टीले भ्रमको खेती गर्न खोजेको पनि सुनेको छु । त्यो त्यति फस्टाउनेवाला छैन ।
नेकपाका नेतृत्वको सरकारले रेलका कुरा गरे । तेलका कुरा गरे । दुईवर्षमा केही काम भएनन् भनेर जनताको बीचमा जानुभएको छ । तर उहाँहरूले के भुल्नु भएन भने तेलको काम भएकै छ । अमलेखगञ्जसम्म पाइपमा तेल आउन थालिसक्यो । हिजोकोजस्तो नाकाबन्दी भएमा पनि सङ्कट हुँदैन । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदा डीपीआर बनाउने समझदारी भइसकेको छ ।
हाम्रो दाबी के छ भने भक्तपुर जहाँ अहिले प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन लागेको छ, त्यहाँ नेकपा बाहेक अरू कुनै पार्टीले एक करोडको परियोजना सुरू गरेको देखाओस् । हिजो विपक्षी साथीको गढ भनिएका ठाउँमा पनि बाटो पिच गर्न, खानेपानी खुवाउन, अरू भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न नेकपा निर्वाचित हुनुपरेको जनताले भुल्न सक्छन् र ?
चुनाव हुन लागेको प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्यटकीय महत्त्वको ठाउँ नगरकोट पनि पर्छ । तर बाटाको कारण नगरकोट सुकिसकेको अवस्था छ । त्यसको एकीकृत विकासको ठोस योजना त देखिएन नि !
नगरकोटको एकीकृत विकासका लागि हामीसँग मूर्त योजना छन् । अघि नै बाटाको प्रसङ्ग आइहाल्यो । त्यसलाई चौतारा र गणेश हिमालको फेदिसम्म पुर्‍याउँछौैं । नगरकोटसम्म आएका पर्यटकलाई गणेश हिमालसम्म पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य हो । काठमाडौं छिर्ने अर्को द्रूत मार्ग पनि हुनसक्छ यो ।
अर्को नगरकोटमा भव्य भ्यू टावर निर्माण गर्छौं । चार अर्बको परियोजनाको डीपीआर तयार भइसकेको छ, चाँगुनारायण नगरपालिकाको पहलमा । अहिले त्यसलाई निजी क्षेत्रका बीचमा सेल गरिराखेका छौं । व्यावसायिक पनि होस् । नेपालमा बनेकामध्ये सबैभन्दा अत्याधुनिक होस् भनेर प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं ।
नगरकोट आएका पर्यटकले नेपाली कला, संस्कृति, जीवनशैली, रहनसहन देख्न पाउन भनेर होम स्टेको अवधारणा अघि बढाएका छौं । नगरकोटको जङ्गल क्षेत्रमा रहेका सल्लाका रूखहरू हटाएर जडिबुटी लगाउने र जडिबुटी हबका रूपमा विकास गराउने लक्ष्य छ । नगरकोटको जङ्गल क्षेत्रमा पाँच लाख जटिबुटी लगाउने योजना अघि बढाएका छौं ।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै नगरकोट क्षेत्रमै अत्याधुनिक पर्यटन बसपार्क बन्दै छ । त्यसमा व्यावसायिक प्रतिष्ठान पनि थपिने छ ।
केही समयअघि सार्वजनिक जग्गामा घरबास नभएकाहरू बस्नु भएको थियो । नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व अन्तर्गत रहेर भत्कायो । हामी पुनः उनीहरूलाई निश्चित ठाउँ दिएर व्यवस्थित ढङ्गले राख्छौं । बनाउने योजना अघि सारिएका त्यस्तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान मल्टिकम्लेक्समा व्यापार व्यवयाय गर्ने अग्राधिकार पुनःस्थापितलाई दिइने छ । गुरु योजना बनिसकेको छ । नगरकोट जानुभयो भने, परियोजनामा यहाँको आँखा परिहाल्छ ।
नगरकोट जोड्ने सहायक मार्ग, हरि गुरुमार्गको कालोपत्रे सकिएको छ । यता ताथलीबाट नगरकोट जोड्ने बाटो पनि बनिसकेको छ । देशकै प्राचीन मन्दिर, पुराना शिलालेख भएको मन्दिर चाँगुनारायणसमेतलाई जोडेर नगरकोट– चाँगु, जालपादेवी र सुडालतिर आइपुग्दा ठूली बह्यायणीसम्म जोडेर धार्मिक पर्यटीक मार्ग बनाउने योजना पनि छ ।
चाँगुनारायाण क्षेत्रलाई स्मार्ट सिटीभित्र पार्दैछौं । पहिलो चरणमा एक लाख रोपनी जमिन स्मार्ट सिटीभित्र आउँछ । यो सहरीकरणकै प्रकृया हो । यस प्रदेशको विकासको अवधारणा अघि गर्दा ६० प्रतिशत भक्तपुरको विकास हुन्छ ।
अतः यो लिच्छवी कालदेखि बस्ती विकास भएको ठाउँको मौलिकता, ऐतिहासिकता, पुरातात्विक, धार्मिक कुराहरू ननासी, नमासी विकासको मूल प्रवाहमा जोड्ने ल्याकत नेकपासँग मात्रै रहकाले निर्वाचन जित्नेमा ढुक्क छु ।